ထူးခြားသောဇာတ်ကောင်ကို string တစ်ခုတွင်ရှာဖွေပါ - TutorialCup
ပင်မစာမျက်နှာ » နည်းပညာဆိုင်ရာအင်တာဗျူးမေးခွန်းများ » String အင်တာဗျူးမေးခွန်းများ » ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင်ကို string ထဲမှာရှာပါ
ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင်ကို string ထဲမှာရှာပါ
Tags: hash တားဆီးခြင်း ကြိုး
In ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင်ကို string ထဲမှာရှာပါ ပြနာ၊ ကြိုး သာစာလုံးအကြီးအက္ခရာ (az) ပါဝင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ထပ်ခါတလဲလဲထပ်ခါတလဲလဲလုပ်တဲ့အက္ခရာကိုရှာပြီးအညွှန်းကိုထုတ်ဖို့လိုတယ်။
အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောဇာတ်ကောင်ပုံနှိပ် -1 တည်ရှိလျှင်။
Explanation For Find ၏ထူးခြားသောဇာတ်ကောင်ကိုရှာဖွေရန်
Implementation For Find တွင်ထူးခြားသောဇာတ်ကောင်တစ်ပုဒ်ရှိသည်
ရလဒ်တစ်ခု integ format နဲ့ပုံနှိပ်ပါ။
1 <= | s ကို | <= 1000000
တစ် ဦး <= s ကို [ဈ] <= z.
ဇာတ်ကောင်အရေအတွက်ကို array ထဲမှာသိမ်းထားပါ။ ထို့နောက်အစမှအဆုံးအထိ loop ကိုဖွင့ ်၍ 1 ပါသောအက္ခရာဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပါ။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထိုအညွှန်းကို print ထုတ်ပြီး loop မှခုန်ပါ။ ဤတွင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရင်းတစ်ခုချင်းစီ၏ဇာတ်ကောင်များ၏ရေတွက်သည်။
a- 0, b- 1, c- 0, d- 0, e- 4, f- 5, g- 1, h- 0, i- 0, j- 2, k- 2, l- 0, m- 1, n- 0, o- 0, p- 0, q- 1, r- 0, s- 0, 0, u- 1, v- 1, w- 4, x- 0, y- 0, z- ၁ ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် string ကိုအစမှဖြတ်သန်းသွားသည်။ နံပါတ် ၁ ပါသောစာလုံးတစ်လုံးရှိမရှိစစ်ဆေးသည်။ ထိုအက္ခရာ၏အညွှန်းကို print ထုတ်ပြီး loop ကိုအဆုံးသတ်သည်။ စာလုံးမတွေ့ပါက -1 ကို print ထုတ်ပါ။ ဒီမှာငါတို့ရတယ် z count က 1 အဖြစ်ဒါကြောင့်ဖြစ်သော z ၏အညွှန်းကိန်း print ထုတ်ပါ 3.
အို (လ) ဘယ်မှာ L ကို string ကို၏အရှည်သည်။
အို (၁) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ kostant array ကို freq အရွယ်အစား ၂၆ ကိုသာဖန်တီးပြီး၊ ဒီထက်နည်းပြီး space ရှုပ်ထွေးမှုကအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား String အင်တာဗျူးမေးခွန်းများ Tags: အမေဇုံ, Apple, ဘလွန်းဘာ့ဂ်, လွယ်ကူသော, Facebook က, Goldman Sachs, Google, hash, တားဆီးခြင်း, Microsoft က, Oracle က, ကြိုး, Zillowpost navigation